Izitudiyo Ukuthengisa Nokuqasha eLondon, eLondon
1 - 10 ka 4945 Uhlu
DescriptionZero deposit availableA Split-level large studio unit covering the lower & ground floor in Olympic House. The Property benefits from solid wooden floors, bathroom with shower, fitted kitchen with appliances over the top level with a large workspace on the lower level.Furnished or unfurnis...
London in London (United Kingdom), Nw5 1nr
Ishicilelwe ngu Loft Style Properties
ILondon iyinhloko-dolobha nedolobha elikhulu kunawo wonke e-United Kingdom nase-England. Idolobha limi eMfuleni iThames eningizimu-mpumalanga yeNgilandi, ekujuleni komfula wamakhilomitha angama-80 (80 km) oholela eNorth Sea. ILondon ibe yindawo enkulu yokuhlala iminyaka eyizinkulungwane ezimbili, futhi ekuqaleni yayibizwa ngeLondinium, eyasungulwa ngamaRoma. IDolobha laseLondon, isikhungo sasendulo nezimali zaseLondon — indawo engamakhilomitha-skwele angu-1,9 nje kuphela futhi eyaziwa ngokuthi yi-Square Mile — inemingcele elandela eduze imingcele yayo yangenkathi ephakathi. IDolobha eliseduze laseWestminster sekungamakhulu eminyaka liyindawo enkulu kahulumeni kazwelonke. Amanye amadolobha angamashumi amathathu nanye asenyakatho naseningizimu yalo mfula nawo aqukethe iLondon yanamuhla. Isifunda saseLondon siphethwe yimeya yaseLondon kanye neLondon Assembly.London ingelinye lamadolobha abaluleke kakhulu emhlabeni. Kunomthelela omkhulu kwezobuciko, ezentengiselwano, ezemfundo, ezokuzijabulisa, ezemfashini, ezezimali, ezempilo, ezokuxhumana, izinsizakalo zobungcweti, ucwaningo nentuthuko, ezokuvakasha kanye nezokuthutha. Ingesinye sezikhungo ezinkulu zezezimali emhlabeni futhi e2019, iLondon ibe nenombolo yesibili ephezulu yabantu ababiza kakhulu e-Europe, ngemuva kweParis. Futhi ngo-2020, iLondon yayinenombolo yesibili ephakeme kunazo zonke zezigidigidi zanoma yiliphi idolobha laseYurophu, ngemuva kweMoscow. Amanyuvesi aseLondon akha indawo enkulu kunazo zonke yezikhungo zemfundo ephakeme eYurophu, kanti iLondon iyikhaya lezikhungo eziphakeme kakhulu njengeImperial College London kwizayensi yemvelo nezifakiwe, iLondon School of Economics kwezesayensi yezenhlalo, kanye ne-University College London ebanzi. Ngo-2012, iLondon yaba idolobha lokuqala ukuba nemidlalo emithathu yanamuhla yama-Olimpiki asehlobo, iLondon inabantu abaningi namasiko ahlukahlukene, futhi kunezilimi ezingaphezu kuka-300 ezikhulunywa esifundeni. Isibalo sabantu bakamasipala abalinganiselwa phakathi kuka-2018 (esihambelana neGreater London) sasicishe sibe yizigidi eziyi-9, okwakwenza kwaba idolobha lesithathu elinabantu abaningi eYurophu. ILondon i-13.4% yabantu base-UK. IGreater London Area Built-up yindawo yesine enabantu abaningi eYurophu, ngemuva kwe-Istanbul, iMoscow, neParis, enezakhamuzi eziyi-9 787 426 ekubalweni kwabantu ngo-2011. Indawo yedolobha elikhulu laseLondon ingelesithathu elinabantu abaningi eYurophu, ngemuva kwe-Istanbul kanye neMoscow Metropolitan Area, enezakhamuzi eziyi-14,040,163 ngo-2016. ILondon inezindawo ezine ezingamagugu omhlaba: iTower of London; IKew Gardens; indawo equkethe isigodlo saseWestminster, iWestminster Abbey, neSonto i-St Margaret; kanye nokuhlala komlando eGreenwich lapho iRoyal Observatory, iGreenwich ichaza iPrime Meridian (0 ° longitude) neGreenwich Mean Time. Ezinye izindawo eziqavile zibandakanya iBuckingham Palace, iLondon Eye, iPiccadilly Circus, iSt Paul Cathedral, iTower Bridge, iTrafalgar Square neThe Shard. ILondon ineminyuziyamu eminingi, imipheme, imitapo yolwazi kanye nemicimbi yezemidlalo. Lokhu kufaka phakathi iBritish Museum, i-National Gallery, i-Natural History Museum, iTate Modern, iBritish Library kanye nezindawo zemidlalo yaseshashalazini iWest End. ILondon Underground iyinethiwekhi yesitimela endala kunazo zonke emhlabeni.